नेपालको ऐतिहासिक सफलता : पहिलो नेपाली स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा (भिडियो सहित ) – Peacepokhara.com
अमेरिका । पहिलो नेपाली स्याटेलाइट सहितको कार्गो यान अन्तरिक्षमा पठाइएको छ । अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित नासाको ‘मिड–एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याड’ बाट स्थानीय समय अनुसार बुधवार दिउसो ४ बजेर ४६ मिनेटमा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिएको हो ।
नेपालको पहिलो भू–उपग्रह ‘नेपाली स्याट–१’ सँगै श्रीलंकाको रावना–१ र जापानको उगिसु भू–उपग्रह सँगै सिग्नोस कार्गो अन्तरिक्ष यान लञ्च गरिएको हो । पहिलो भू उपग्रह अन्तरिक्षमामा पठाएर नेपालले ठूलो सफलता हात पारेको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट नास्टले भू–उपग्रह निर्माणका लागि जापानको क्यूटेक विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको थियो । उपग्रह निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट इलेक्ट्रिकल र कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरिरहेका नास्टका प्राविधिक अधिकृत हरिराम श्रेष्ठ र स्पेस टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिक आभाष मास्के खटिएका थिए ।
२०७४ असोज २८ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट क्युटेकसँग समझदारी भएपछि उपग्रह निर्माण सुरु भएको थियो । पृथ्वीको भूमध्यरेखाबाट ९० डिग्रीको कोण भएर पृथ्वीभन्दा करिब ४ सय किलोमिटरमाथि रहने यो उपग्रह नेपालको आकाशमा दैनिक ५-१० मिनेटसम्म रहने नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख रवीन्द्र ढकालले बताए । आफ्नै उपग्रह नभएकाहरुका लागि जापानले सुरु गरेको बड्र्स परियोजना अन्तर्गत नेपाली स्याटलाइट प्रक्षेपणको अबसर जुरेको हो ।
स्याटेलाइटमा ४३७ मेघाहर्जको यूएचएफ ब्यान्ड प्रयोग गरिएको छ । ‘नेपाली स्याट–१’ नानो भू–उपग्रह हो । यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ १०/१० सेन्टिमिटर छ । यसको पहिलो काम तस्बिरहरू खिचेर पठाउनु हो । नानो स्याटेलाइट निर्माणबाट प्राप्त अनुभवलाई ठूला भू–उपग्रहहरू निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने नास्टले जनाएको छ ।
उपग्रह अन्तरिक्षमा पुगेपछि एक महिनासम्म अन्तरािष्ट्रय स्पेस स्टेशनमै रहने छ । स्पेस स्टेसनमा रहेका अन्तरिक्षयात्रीले पुनः स्याटेलाइट परीक्षण गर्नेछन् । मे तेस्रो सातामा स्पेस स्टेसनबाट भू–उपग्रहलाई पृथ्वीको कक्षमा छाडिने बताइएको छ । परिक्षणका रुपमा रहने नेपाली स्याटलाइटलाई नासाले निगरानीमा राख्नेछ ।
यसको सहयताले नेपालले आफ्नो भूभागको मौसम, पानी, तापक्रम आदि समेटिएका तस्बिरहरू प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालीस्याट-१ भू-उपग्रह लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा रहने छैन। यो भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा करिब तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म रहनेछ । लामो समय सञ्चालनमा रहने ठूलो भू-उपग्रह निर्माण र प्रक्षेपण गर्न नेपालले ठूलै लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उपकरण खरिद गर्न नास्टले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
हजारौँ दाजुभाइकी एक्ली दिदी ‘अञ्जली’ !
peacepokhara 01 Nov 2016
मुस्ताङ बस दुर्घटनामा मृतक सबैको सनाखत, घाइतेको पोखरामा उपचार हुदै
peacepokhara 22 Apr 2017
भुलबस गोली चल्यो ! श्रीमतिको हातबाट श्रीमानको मृत्यु
ह्याण्डबलको महिला टोलीको बिदाई
मगर संघ बाघमारा इकाईमा प्रेमबहादुर आलेमगर निर्वाचित
हरिहर गुफाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा महानगरले सहयोग गर्छ :मेयर जिसी
मुस्लिम समुदायको महान् पर्व बकर इद आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदै
प्रदेश सांसद दिनदहाडै लुटिईन्